အသက် (၃၅)နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာတွေ သတိထားသင့်လဲ? - For her Myanmar
အသက် (၃၅)နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဘာတွေ သတိထားသင့်လဲ?
ဟိုလူပြော ဟုတ်နိုး.. ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနဲ့ တိုင်ပတ်မနေစေဖို့…
ယောင်းတို့ရဲ့ ဘဝ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ၊ ကလေးယူဖို့ဆိုတာလည်း မေ့ထားလို့မရတဲ့အပိုင်းလေးပါပဲ။ အရေးကြီးတာတွေလုပ်ရင်း ကိုင်ရင်း အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးယူရမယ့်အချိန်က အသက်၃၅နှစ် ရောက်လာပြီဆိုပါစို့… အသက်က ကြီးနေပြီ.. ကလေးမယူနဲ့တော့လို့ ဘေးလူတွေ ပြောလာတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ ဇဝေဇဝါတွေ ဖြစ်သွားကြမှာပါပဲ။ ဒီလို အတွေးတွေနဲ့ စစ်ခင်းနေရတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ ယောင်းတို့ရေ…
ဒေါက်တာစုရဲ့ အလိုအရတော့ ယောင်းတို့ကို ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေ ပြောပြပြီး ဒီပေါ်မူတည်လို့ ရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်..
အရင်ဆုံးတော့ ကောင်းတဲ့ဘက်က ကြည့်ကြရအောင်နော်..
အသက် ၃၅နှစ်ရွယ်မှာ –
အလုပ်အကိုင် အတည်တကျဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ လုပ်ငန်းအတွက် ပူပင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေလောက်ပြီမို့ ကလေးယူတဲ့အခါ တည်ငြိမ်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အလုပ်အကိုင် အခြေကျတော့ ငွေရေးကြေးရေးလည်း သိပ်ပူစရာမလိုလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အပူတစ်ခု လျော့တာပေါ့နော်။
FSH လို့ခေါ်တဲ့ မမျိုးဥကြွေစေတဲ့ ဟော်မုန်းများနေတဲ့ အချိန်မို့ ဒီအရွယ်မှာ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
တက်ကြွတယ် ။ ကျန်းမာပါတယ်။
အသက် ၃၅ဆိုတာ တက်ကြွနေဆဲ အချိန်ပါ။ ကျန်းမာရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ့…
ကဲ.. ဒါတွေကတော့ ကောင်းကွက်တွေပေါ့နော်.. မကောင်းတာတွေကတော့…
Related Article >>> ကိုယ်ဝန်ရှိရင် (၂) ယောက်စာ စားရတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
ကလေးယူမယ်ဆိုရင်လေ အသက် ၃၅ကို အရမ်းတော့ မကျော်စေချင်ပါဘူး။
အသက် ၃၅ ကျော်ရင် –
ကလေးရနိုင်ခြေ နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ မမျိုးဥ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း အရည်အသွေး ကျဆင်းလာတာမို့ ကလေးရနိုင်ခြေ နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ကျပြီး ၆လနေလို့မှ ဘာကိုယ်ဝန်တားနည်းမှ မသုံးဘဲကလေးမရဘူးဆိုရင် ပေါ့ဆမနေသင့်ပါဘူး။ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ကလေးရဖို့အတွက် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ကလးငယ်မှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်တွေ ပါလာနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
အသက် ၃၅ အရွယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်တဲ့ Chromosomal Disorder ဖြစ်နိုင်ခြေ အယောက်၂၀၀ မှာ ၁ယောက်၊ အသက်၃၉ကျော်ရင် အယောက် ၁၀၀မှာ ၁ယောက်နီးပါးအထိ နှုန်းထား မြင့်တက်လာတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အန္တရာယ်တွေ အနည်းငယ်မြင့်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ ကလေးပျက်ကျတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆာင်ချိန် သွေးတိုးတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို ၊ လမစေ့ဘဲမွေးတာ ။ ဒီလို အန္တရာယ်တွေဟာ အသက်ရလာတဲ့ အမျှ နည်းနည်းတက်လာနိုင်ပါတယ်။ အသက် ၃၅နှစ်ကျော်ရင်တော့ ပိုတက်လာနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> မီးနီဖြတ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား?
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်အားဆေး ဖြစ်တဲ့ Folic Acid 400 mg သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ် ဦးခေါင်းခွံကျောရိုး ချို့ယွင်းချက်မပါဘဲ မွေးဖွားအောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်မှာ အသက်အရွယ်အရ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆီးချိုသွေးတိုးတွေကို ကြိုတင်စစ်ဆေးထားပေးပါ။ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်တည်းက ရောဂါအခြေအနေတည်ငြိမ်အောင် ကုသထားသင့်ပါတယ်။
– အိပ်ချိန်နားချိန် သေချာထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်ဟာ အလုပ်များတတ်တဲ့ အရွယ် ဖြစ်ပေမဲ့ အိပ်ချိန်နားချိန်ပြည့်ဝမှသာ ကျန်းမာတဲ့ ဗိုက်ဗိုက်ဖြစ်မှာပါ။
– ကိုယ်အလေးချိန် သတိထားပါ။
ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက ကိုယ်အလေးချိန်ကို မပိုရလေအောင် အမြဲ သတိထားသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဆီးချိုသွေးတိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ တက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဟိုလူပွော ဟုတျနိုး.. ဒီလူပွော ဟုတျနိုးနဲ့ တိုငျပတျမနစေဖေို့…
ယောငျးတို့ရဲ့ ဘဝ အစီအစဉျတှထေဲမှာ အိမျထောငျပွုဖို့ ၊ ကလေးယူဖို့ဆိုတာလညျး မထေ့ားလို့မရတဲ့အပိုငျးလေးပါပဲ။ အရေးကွီးတာတှလေုပျရငျး ကိုငျရငျး အိမျထောငျပွုပွီး ကလေးယူရမယျ့အခြိနျက အသကျ၃၅နှဈ ရောကျလာပွီဆိုပါစို့… အသကျက ကွီးနပွေီ.. ကလေးမယူနဲ့တော့လို့ ဘေးလူတှေ ပွောလာတဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ဇဝဇေဝါတှေ ဖွဈသှားကွမှာပါပဲ။ ဒီလို အတှေးတှနေဲ့ စဈခငျးနရေတယျဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျကွညျ့ပါ ယောငျးတို့ရေ…
ဒေါကျတာစုရဲ့ အလိုအရတော့ ယောငျးတို့ကို ကောငျးကြိုးဆိုးကြိုးလေးတှေ ပွောပွပွီး ဒီပျေါမူတညျလို့ ရှေးခယျြတာ အကောငျးဆုံးဖွဈမယျလို့ ထငျပါတယျနျော..
အရငျဆုံးတော့ ကောငျးတဲ့ဘကျက ကွညျ့ကွရအောငျနျော..
အသကျ ၃၅နှဈရှယျမှာ –
အလုပျအကိုငျ အတညျတကဖြွဈနလေောကျပါပွီ။ လုပျငနျးအတှကျ ပူပငျစိတျဖိစီးမှုတှကေို ခံနိုငျရညျရှိနလေောကျပွီမို့ ကလေးယူတဲ့အခါ တညျငွိမျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိနတေယျလို့ ဆိုရမှာပါ။အလုပျအကိုငျ အခွကေတြော့ ငှရေေးကွေးရေးလညျး သိပျပူစရာမလိုလောကျဘူး ထငျပါတယျ။ ဒီတော့ အပူတဈခု လြော့တာပေါ့နျော။
FSH လို့ချေါတဲ့ မမြိုးဥကွှစေတေဲ့ ဟျောမုနျးမြားနတေဲ့ အခြိနျမို့ ဒီအရှယျမှာ အမှာကိုယျဝနျဆောငျတှေ ဖွဈနိုငျခွေ မြားပါတယျ။
တကျကွှတယျ ။ ကနျြးမာပါတယျ။
အသကျ ၃၅ဆိုတာ တကျကွှနဆေဲ အခြိနျပါ။ ကနျြးမာရေးဘကျကကွညျ့မယျဆိုလညျး ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှုတှကေို ကောငျးကောငျးရငျဆိုငျနိုငျတဲ့ အသကျအရှယျပေါ့…
ကဲ.. ဒါတှကေတော့ ကောငျးကှကျတှပေေါ့နျော.. မကောငျးတာတှကေတော့…
Related Article >>> ကိုယျဝနျရှိရငျ (၂) ယောကျစာ စားရတယျဆိုတာ တကယျလား?
ကလေးယူမယျဆိုရငျလေ အသကျ ၃၅ကို အရမျးတော့ မကြျောစခေငျြပါဘူး။
အသကျ ၃၅ ကြျောရငျ –
ကလေးရနိုငျခွေ နညျးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
မိနျးကလေးတှဟော အသကျရလာတာနဲ့အမြှ မမြိုးဥ ထုတျလုပျမှုနှုနျး အရညျအသှေး ကဆြငျးလာတာမို့ ကလေးရနိုငျခွေ နညျးသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့အိမျထောငျကပြွီး ၆လနလေို့မှ ဘာကိုယျဝနျတားနညျးမှ မသုံးဘဲကလေးမရဘူးဆိုရငျ ပေါ့ဆမနသေငျ့ပါဘူး။ ဆရာဝနျနဲ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပွီး ကလေးရဖို့အတှကျ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
ကလးငယျမှာ မှေးရာပါ ခြို့ယှငျးခကျြတှေ ပါလာနိုငျခွေ ရှိပါတယျ။
အသကျ ၃၅ အရှယျ ကိုယျဝနျဆောငျတှမှော မှေးရာပါ ခြို့ယှငျးခကျြဖွဈတဲ့ Chromosomal Disorder ဖွဈနိုငျခွေ အယောကျ၂၀၀ မှာ ၁ယောကျ၊ အသကျ၃၉ကြျောရငျ အယောကျ ၁၀၀မှာ ၁ယောကျနီးပါးအထိ နှုနျးထား မွငျ့တကျလာတတျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ အန်တရာယျတှေ အနညျးငယျမွငျ့လာနိုငျပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတိုငျးမှာ ကိုယျဝနျဆောငျ အန်တရာယျတှဖွေဈတဲ့ ကလေးပကျြကတြာ၊ ကိုယျဝနျဆာငျခြိနျ သှေးတိုးတာ၊ ကိုယျဝနျဆောငျဆီးခြို ၊ လမစဘေဲ့မှေးတာ ။ ဒီလို အန်တရာယျတှဟော အသကျရလာတဲ့ အမြှ နညျးနညျးတကျလာနိုငျပါတယျ။ အသကျ ၃၅နှဈကြျောရငျတော့ ပိုတကျလာနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> မီးနီဖွတျရငျ ကိုယျဝနျရနိုငျလား?
ကိုယျဝနျမဆောငျခငျမှာလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျအားဆေး ဖွဈတဲ့ Folic Acid 400 mg သောကျသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ကလေးငယျ ဦးခေါငျးခှံကြောရိုး ခြို့ယှငျးခကျြမပါဘဲ မှေးဖှားအောငျ ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။
ကိုယျဝနျမဆောငျခငျမှာ အသကျအရှယျအရ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ဆီးခြိုသှေးတိုးတှကေို ကွိုတငျစဈဆေးထားပေးပါ။ ရှိတယျဆိုရငျလညျး ကိုယျဝနျမဆောငျခငျတညျးက ရောဂါအခွအေနတေညျငွိမျအောငျ ကုသထားသငျ့ပါတယျ။
– အိပျခြိနျနားခြိနျ သခြောထားသငျ့ပါတယျ။
ဒီအရှယျဟာ အလုပျမြားတတျတဲ့ အရှယျ ဖွဈပမေဲ့ အိပျခြိနျနားခြိနျပွညျ့ဝမှသာ ကနျြးမာတဲ့ ဗိုကျဗိုကျဖွဈမှာပါ။
– ကိုယျအလေးခြိနျ သတိထားပါ။
ကိုယျဝနျမဆောငျခငျကတညျးက ကိုယျအလေးခြိနျကို မပိုရလအေောငျ အမွဲ သတိထားသငျ့ပါတယျ။ မဟုတျရငျ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ဆီးခြိုသှေးတိုး ဖွဈနိုငျခွေ တကျလာပါလိမျ့မယျ။
Tags: 35, Age, Health, Pregnancy, Pregnant
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း - ၃)
၂၀၁၈ ရဲ့  ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ကား (၆) ကား
မယ်တင် (ဆေး-၁) December 18, 2018